Guru Gobind Singh က၏ 52 Hukams (အမိန့်ပြန်တမ်း) အဘဖြစ်ပါသလား
Guru Gobind Singh က၏ 52 Hukams ဘာတွေလဲ?
Rehit Nama ဒသမ Guru ၏အဆိုအရ
အဆိုပါ ကငျြ့ Sikhism ကုဒ် Reht Maryada, ဒသမထုတ်ပေး 52 hukams သို့မဟုတ်အမိန့်ပြန်တမ်းအပေါ်အခြေခံသည် Guru Gobind Singh က Nande အတွက် 1708 ခုနှစ်နှင့်ဘူးလ်နှင့် Hazoor Sahib နေထိုင်သည့်ဆစ်ခ်မှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သင့်လျော်သောအပြုအမူအပေါ်ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းအဆိုပါ 52 hukamnamas သို့မဟုတ်အမိန့်ပြန်တမ်း Guru Gobind Singh က၏အမိန့်ဖြင့်ရေးသားသူ၏ကြီးမြတ်အဘိုး Bhai Baba ဗုဒ္ဓခဲ့ Baba Raam Singh က Koer အားဖြင့်ချကူးယူခဲ့ကြသည်။ Guru Gobind Singh ကစာရွက်စာတမ်းမှသူ၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို affixed, သမိုင်းဝင် Gurdwara Paonta Sahib မှာမြင်စေနိုင်သည့်တစ်ဦးမိတ္တူနှင့် ပတ်သက်. 44 ကီလိုမီတာ Dehradun ထံမှ Himachal, Pradesh ပြည်နယ်အိန္ဒိယတွင် Sirmaur ၏ Paonta Sahib မြို့မှာရှိတဲ့ Yamuna မြစ်ဘဏ်များအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 52 Hukams သို့မဟုတ်အမိန့်ပြန်တမ်း
"Dharam Dee kirat karnee |
တစ်ဦးလှူဒါန်း ဒသမရှယ်ယာ သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်း၏။
Learn Gurbani နှလုံးသည်။
Amrit Vela utthnaa |
စဉ်အတွင်းထလော့ Amritvela ။
ဆစ်ခ် sevak Dee sevaa ruchee naal karnee |
Gurbanee က de arth ဆစ်ခ် vidhvanaa tuo parrhnae |
အဆိုပါလေ့လာပါ Gurbani ၏အနှစ်သာရကို လေ့လာသင်ယူဆစ်ခ်နှင့်အတူ။
တင်းကြပ်စွာ5K သည်၏စည်းကမ်းကိုလိုက်နာပါ။ အဆိုပါသွားပါ့မယ်လိုက်နာ ယုံကြည်ခြင်း၏ငါးဆောင်းပါးများကို ။
အဆိုပါ Apply သန့်ရှင်းသောဓမ္မသီချင်း လက်တွေ့ဘဝဖြစ်သည်။
ယုံကြည်လက်ခံ Guru Granth Sahib သစ္စာဉာဏ်အလင်းဖို့လမ်းညွှန်အဖြစ်ဂျီ။
မည်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ, ပထမဦးဆုံး၏ပဌနာလုပ်ဆောင် ardas ။
Jaman, maran, ja viah mokae jup da paatth kar tihaaval (Karaah Parsaad) kar Anand Sahib DIA Punj oprunth sangat noo vartaaouna paurian, ardaas, pratham panj pyaariaan atae hazooree granthee noo vartaa kae |
အဘို့ မွေးဖွားအမည်, အသုဘ, ဒါမှမဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအခမ်းအနားများ သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာစာဖတ်ခြင်း paath , ရွတ်ဆို Japji Sahib စဉ် Karah Prashad အောင် , ငါးကျမ်းပိုဒ်လုပ်ဆောင် Anand Sahib နှင့် ardaas, ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူး Karah Prashad ယင်းမှ Panj ပြား တက်ရောက်ခြင်း, Granthi , အဲဒီနောက်မှ sangat ကိုးကှယျခွငျးအဘို့အသိမ်းယူကြ၏။
ထိုး tak Karaah Parshaad vartadaa rahae sadh sangat addol batthee rahae |
Karaah Parshaad လူတိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်သည်အထိ, ပရိသတ်နေဆဲဖြစ်နှင့်ထိုင်ဆက်လက်တည်ရှိသင့်၏။
မရှိရင် Anand လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲအခမ်းအနားကို ဇာတိပကတိဆက်ဆံရေးပေါ်ပေါက်သင့်ပါဘူး။
Par istree, ma bhain, dhee bhain, kar jaananee ။ Par istree da nahee karnaa သီဆိုခဲ့ |
သင့်ရဲ့ wedded ဇနီးထက်အခြား, သင့်ရဲ့မိခင်နှင့်နှမများအဖြစ်အားလုံးအမျိုးသမီးတွေစဉ်းစားပါ ။ သူတို့နှင့်အတူဇာတိပကတိလူအိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးကိုမလုပ်ကြပါဘူး။
အဆိုပါ Rehit အတိုင်းလိုက်နာနှင့်ဘုရားသခင့်နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့သူ Gursikhs ၏အပေါင်းအဘော်လုပ်ပါ။
နားထောင်ခြင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ Kirtan နှင့်များ၏အနှစ်သာရ၏ဆွေးနွေးမှုများ Gurbani နေ့တိုင်း။
Dhan, javaanee, Tae kul jaat da abhiman naee karnaa (။ Nanak daadak tahe duae goath Saak guroo Sikhan hoath သီဆိုခဲ့) |
စည်းစိမ်ဥစ္စာ, နုပျိုသို့မဟုတ်နွယ်၏မာနထောင်လွှားခြင်းမရှိကြနှင့်။ (မည်သို့ပင်မိခင်နှင့်ဖခင်၏ဇာတ်သို့မဟုတ်အမွေအနှစ်, အ Guru ရဲ့ဆစ်ခ်၏အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောမိသားစု၏မောင်နှမဖြစ်ကြသည်။ )
ဖျာ uchee Tae suchee rakhnee |
အလုံးစုံကို သိ. အံ့ဩဘှယျသစ္စာဉာဏ်အလင်း၏လက်ဆောင်များအဖြစ်ဉာဏ်နှင့်အာဏာတန်ဖိုးထားတယ်။
Sutantar vicharna ။ Raaj Kaaj နျြ့ဘုရငျ့ kamaan Tae doosrae mutaa DIA purshaan noo huk nahee daenaa |
Dushman naal saam, daam, bhaed, aadiak, upaa vartnae uprant udh karnaa စားရကြ၏ |
ရန်သူများကို, အလေ့အကျင့်သံတမန်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါ, အားလုံးနည်းစနစ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပါဝငျမတိုင်မီနည်းဗျူဟာများနှင့်အိပ်ဇောအမျိုးမျိုး employ ။
လက်နက်နှင့် horsemanship များ၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်မီးရထား။
Doosrae mataa Dae pustak, vidyaa parhnee ။ Gurbanee, Akaal Purakh Tae karnaa drirh ထိုနေ့ကိုပု bhrosaa |
တခြားသူရဲ့ယုံကြည်မှုကို၏စာအုပ်များနှင့်ယုံကြည်ချက်လေ့လာပါ။ သို့သော် [Undying ဘုရားသခငျ့ပြယုဂ်] Gurbani နှင့် Akal Purakh အတွက်ယုံကြည်မှုထိန်းသိမ်းရန်။
အဆိုပါ Guru သွန်သင်ချက်တွေကိုလိုက်နာပါ။
Raheraas da paath kar kharae ဟို kae ardaas karnee |
ရွတ်ဆိုပြီးနောက် Rehras [ညနပေိုငျးဆုတောငျးခကျြ] ထရပ်များနှင့် Ardas လုပ်ဆောင်။
Saun valae sohilaa atae '' paun ဂုရု pani pita ... '' salok parhnaa |
နှောင်းပိုင်းညဦးယံ၌ပဌနာသရွတ်ဆို Sohila နှင့်ကျမ်းပိုဒ် "Pavan ဂုရု pani pita ... " အိပ်ပျော်နေသောမီ။
| binaa nahee rehnaa Dastaar
အဆိုပါမပါဘဲဖြစ်ဘယ်တော့မှမ ဗေါင်း အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်။
တစ်ဦးနေရပ်လိပ်စာ Singh က Singh က [သို့မဟုတ်အပါအဝင်သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုနာမတော်ဖြင့် Kaur တစ်ဝက်ကကိုအတိုကောက်သို့မဟုတ်အမည်ဝှက်သူတို့ကိုမခေါ်ကြဘူး,] ။
ဆာ Muna noo kanaiaa nahee daenee ။ Uos ghar daeve jithae Akal Purukh Dee sikhee ဟက်တာ, jo karza-ai naa hovae, bhalae subhaa da hovae, bibaekee atae gyanvaan hovae |
တစ်ဦးရိတ်တအိမ်ထောင်မှာတစ်ဦးသမီး၏လက်ကိုမပေးပါနဲ့။ အဆိုပါ Undying ဘုရားသခငျ့ပြယုဂ် Akal purakh နှင့် Sikhism ၏သဘောတရားစည်းကမ်းနှင့်ပညာတတ်ဖြစ်သည့်တစ်ဦးနှစ်သက်သဘာဝတရား၏ကြွေးမြီမရှိဘဲအိမ်ထောင်စုရန်, လေးစားကြသည်ဘယ်မှာအိမ်ထောင်စုမှသူမ၏ပေးပါ။
ရဲ့အခြားစီးပွားရေးအကြောင်းကို gossiping အားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းမရောက်စေပါနဲ့။
သာမြင်နေမှုအတွက်ဘုရားဖူး Make Gurdwaras ။
Bachan karkae paalnaa | ဖန်ဆင်းသမျှသောကတိတော်များကိုထားပါ။
Dikhaavae da ဆစ်ခ် nahee ငှက်ပျောသီး |
| Sikhi kesaa-suaasa nibhaaounee သီဆိုခဲ့
နဂိုအတိုင်းနှင့် unshorn ဆံပင်နှင့်အတူတစ်ဆစ်ခ်နေထိုင်ပြီးသေဆုံးလျက်ရှိသည်။
ခိုးဝှက်, အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်, cheat, လှည့်စား, လိမ်နှင့်လုယက်မှုကိုရှောင်ကြလော့။
ဆစ်ခ် da itbaar karnaa |
အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် langar ဘက်မလိုက်မှုနှင့် prashad ။ "
ပထမ Noble အမှန်တရား
Epiphany နှင့်သုံးမာဂုပညာရှိ - အလယ်ခေတ်ခရစ္စမတ်သမိုင်း
တစ်ဦး Bodhisattva ကဘာလဲ?
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် Prajna သို့မဟုတ် Panna
2000 ၏ထိပ်တန်း 100 ပေါ့ပ်သီချင်းများ
ဆယ်ပါးဂရိတ် Classic ရုပ်ရှင်ကိုသင် Started ရယူပါ
သင့်ရဲ့ Homeschool အတွက်ပမာဏအကဲဖြတ်ရန်နည်းလမ်းများ
Buena Vista ကတက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
အနောက်တိုင်းမီချီဂန်တက္ကသိုလ် (WMU) အဆင့်လက်ခံရေး
ဘာသာရေးထုံးတမ်း, ထုံးတမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများ Mabon သည်ဆောင်းဦးရာသီ Equinox နေ့အခမ်းအနားကျင်းပရန်
အင်တာဗျူး: အဂျူလီပျက်စီးခြင်း၏ Kathy Wilcox နှင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ်
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: tel- သို့မဟုတ် telo-
ပထမကမ္ဘာစစ်အပေါ်ထိပ်တန်း 17 စာအုပ်များ
MCAT Apps ကပ Worth အဆိုပါဒေါင်းလုပ်
သင်က Paintball Play မှ Be လုပ်နည်းဟောငျးဖူးသလား?
နီမောင်းသောအထည် Oak, မြောက်အမေရိကတစ်ဦးကထိပ်တန်း 100 အဖြစ်များသည့်သစ်ပင်
Ford ကားက F-Series ပစ်ကပ်ထရပ်ကားများ, 1980 - 1986
'' Aller, '' Devoir, '' Fair 'နှင့်အခြားပြင်သစ် Semi-အရန်ကြိယာ
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဒုတိယစစ်ပွဲ Miscalculations နှင့်သူရဲကောင်းများကမှတ်သားခဲ့